ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	ဘဘ ဦးစံလင်း ( မြေပုံ ) ခင်ဗျား….
ဝမ်းသာပါတယ် ဘဘ အခုလို ခေါင်းလောင်းကြီးကို ရှာဖွေနိုင် ( ဘဘ အပြောအရ ) တဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာရပါ၏…ဘဘ ဒီလိုပဲပြောမယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ပြီးသားပါ ဘဘ ပြောထားတဲ့ရက် ကလည်း ပြည့်နေပြီ ဆိုတော့ ဘဘ ဒီလိုပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့ ၊ ဘဘ တင် ဒါမျိုး ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဘဘ အရင် ခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တိုင်း တွေ့ပြီလို့ပဲ ပြောခဲ့တာ , မတွေ့ဘူးလို့ဘယ်အဖွဲ့ကမှ မပြောခဲ့ဘူး, ခက်တာက တွေ့တယ်သာပြောကြတာ ကုန်းပေါ်ကိုတော့ အခုချိန်ထိ ရောက်မလာသေးဘူး..တစ်ခုရှိတာက ဘဘ အရင် ရှာခဲ့တဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ ကတော့ ခေါင်းလောင်းကို တွေ့ပြီ သို့သော် နည်းပညာလိုအပ်ချက်၊ အစီုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှု မရခြင်း,တွေ့ထားတာက ထုထည်ကြီးတဲ့ ဂျင်ပုံကြီး မို့ ခေါင်းလောင်းဆိုတာ ၁၀၀% မသေချာလို့ ဆိုပြီး ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပြီး လက်လျော့ လိုက်ကြတယ်။
ဘဘ က ဒါကြီးကို ဆယ်မယ်ဆိုပြီး Media အကြို ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ကတည်းက အရူးကွက်နဲ့ စခဲ့တာလေ …ဘဘ မှတ်မိမှာပါ..ဘဘ ပဲ မျက်ရည် လည်ရွဲ နဲ့ ပထမ အခေါက်က တွေ့ပေမယ့် နဂါးတွေ စောင့်လို့ ဘဘ ကို ရေအောက်ထဲမှာ ဂုပ်ကို ဆွဲထားလို့ ဆယ်လို့မရခဲ့ဘူး(ဂုပ်ကိုသာ ဆွဲ မထားဘူးဆိုရင် တစ်ခါတည်းပဲ ပွေ့ ယူလာတော့မလို) ဆိုပြီး Media ရှေ့မှာ မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက် ငိုချင်းချ ပြီး အရူးကွက်စနင်းခဲ့တာ သားက မှတ်မိတယ်ခင်ဗျ….
ဘဘုန်းကလည်း နဂါးတွေ သိုက်တွေ လူဝင်စားတွေဆိုရင် ဘဘုန်းဂွင် တွေ ဆိုတော့ အခုရှာတဲ့နေရာကနေ ပေ ၂၀ လောက် ရွှေ့ရှာပါဆိုပြီး မိန့်တယ်ခင်ဗျ ….ဘဘ က လည်း နဂို ကတည်းက ဂယောင်ဆိုတော့ ဘဘုန်း ပြောတဲ့နေရာကို ရွှေ့ တယ်ခင်ဗျ ( မရွှေ့ရင်လည်း ဘဘ ဘာလုပ်ရမှန်းမှ မသိတော့တာ ) သောင်တူးစက်တောင် ပြောတဲ့နေရာ မရောက်သေးဘူး ဆရာတော်က ခေါင်းလောင်းတွေ့ပြီ ဆိုပြီး media တွေကို မိန့်လိုက်တယ် အဲ့လို ဘဘ တောင်မသိလိုက်ပဲ ဆရာတော်က ဖောလိုက်တော့ ဘဘ ရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ဘဘုန်းအရှက်မကွဲအောင် ခေါင်းလောင်းတော့တွေ့တယ် ဒါပေမယ့် ဓမ္မစေတီ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ထပ်ဖောရသေးတယ် , အဲ့ဒီ မှာခေါင်းလောင်းက ၂ လုံးလား ဆိုပြီး media ကိုကိုမမ တို့ ယောင်စိန် တွေ ဖြစ်ကုန်ရော..( ဘဘ တို့ အဖွဲ့က ရီရတာတော့ အမှန်ပဲ )
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ကယ်ကို ခေါင်းလောင်းကြီး ကို ဆယ်နိုင်ပြီ ဆိုရင် ခေါင်းလောင်းတီးဖို့ ငပိရိုး နဲ့အတူ ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေပါ့မယ် ဘဘ ရေ (ခေါင်းလောင်းက ငပိရိုး နဲ့ထိုးမှ အသံထွက်မယ်ဆိုလို့ ) ဘဘ လို ဂယောင်ကို ခင်တဲ့ဖိုးသား ( ငပိရိုးနဲ့စောင့်နေသူ)
This entry was posted in Artical, ပစ်စာ, မြန်မာသတင်း and tagged ဓမ္မစေတီ, ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း, ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာတွေ့, ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအကြောင်း, ဦးစံလင်း (မြေပုံ), ခေါင်းလောင်းကြီးတွေ့ပြီ, မြန်မာသတင်း, Burma Blogger, Burma Blogger Shwe Htoo, Burma News, Damazedi Bell, Myanmar, Myanmar News, Yangon on August 27, 2014 by koshwehtoo.	Post navigation
← ဇွဲနေဝင်းနှင့် တစ်ညတာ
အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်သူများ စာရင်းက ဘယ်သူတွေ လွတ်ကြမလဲ →